नयाँ सीडीसी मास्क दिशानिर्देशहरू: तपाईलाई के थाहा छ
घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » स्वास्थ्य समाचार » नयाँ सीडीसी मास्क दिशानिर्देशहरू: तपाईलाई के थाहा छ
ब्रेकिंग यात्रा समाचार • व्यापार यात्रा • शिक्षा • सरकारी समाचार • स्वास्थ्य समाचार • समाचार • मान्छे • जिम्मेवार • सुरक्षा • पर्यटन • यात्रा तार समाचार • अहिले प्रचलनमा • संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रेकिंग न्यूज
N95 र KN95 मास्कहरू फिल्टर कणहरूमा धेरै राम्रो छन् तर अझै पनि लगाउन अपेक्षाकृत सजिलो छ। तिनीहरू स्वास्थ्य सेवा वा निर्माण कार्यहरू जस्ता व्यावसायिक सेटिङहरूको लागि डिजाइन गरिएको हो। मास्कले व्यक्तिको अनुहारमा प्रभावकारी छाप बनाउँछ र कम्तिमा 95% साना कणहरूलाई फिल्टर गर्न भनिन्छ।
संयुक्त राज्य अमेरिका रोग नियन्त्रण र रोकथाम लागि केन्द्र (सीडीसी) कथित रूपमा विश्वव्यापी COVID-19 महामारीको बीचमा मास्कको उचित प्रयोगमा यसको दिशानिर्देशहरूको लागि अद्यावधिक जारी गर्न तयार छ।
अमेरिकीहरूलाई कोरोनाभाइरसको फैलावट रोक्नको लागि राम्रो-फिल्टरिङ (र अधिक महँगो) N95 र KN95 मास्क लगाउन आग्रह गरिनेछ।
यदि मानिसहरूले "पूरै दिन KN95 वा N95 मास्क लगाएर सहन सक्छन्" भने, उनीहरूले त्यसो गर्नुपर्छ, CDC भन्छ।
N95 र KN95 मास्क के हो?
N95 र KN95 मास्कहरू बीचको मात्र भिन्नता अमेरिकी र चिनियाँ अधिकारीहरूले तोकेका विभिन्न मापदण्डहरूबाट उत्पन्न हुन्छ। चीनलाई KN95 मास्कको फेस-फिट परीक्षण आवश्यक छ, अमेरिकाको विपरीत, जहाँ अस्पतालहरू जस्ता संस्थाहरूको यस क्षेत्रमा आफ्नै नियमहरू छन्। अमेरिकी मानकले N95 मास्कहरू KN95 मास्कहरू भन्दा अलि बढी "सास लिन सक्ने" हुन आवश्यक छ।
2. के हो सीडीसी अब मास्कमा सिफारिसहरू?
CDC दिशानिर्देशहरूको हालको संस्करण, पछिल्लो अक्टोबरमा अद्यावधिक गरिएको, धेरैजसो सेटिङहरूमा अधिकांश मानिसहरूका लागि कपडाको दुई तहको साथ अधिक आरामदायक कपडाको मास्क प्रयोग गर्न सिफारिस गर्दछ। यसले विशेष गरी सामान्य जनसंख्यालाई "सर्जिकल" चिन्ह लगाइएको N95 रेस्पिरेटरहरू नलगाउन आवश्यक छ - जसको अर्थ तिनीहरू पहिरन गर्ने र वरपरका मानिसहरूलाई जोगाउन डिजाइन गरिएको हो।
कारण यो हो कि अमेरिकी अस्पतालहरूलाई KN95 संरक्षण प्रयोग गर्न अनुमति छैन, र CDC ले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सीमित स्टकमा प्राथमिकताको पहुँच गर्न चाहन्छ। आलोचकहरू भन्छन् कि सिफारिस, जुन समयको हो जब व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) विश्वव्यापी रूपमा कम आपूर्तिमा थियो, लामो समयदेखि अप्रचलित छ।
3. Omicron को बारे मा परिवर्तन छ?
छोटकरीमा, हो, तर त्यो सम्पूर्ण कथा होइन। ओमिक्रोन भेरियन्टले SARS-CoV-2 भाइरसको अघिल्लो स्ट्रेनको तुलनामा भ्याक्सिन-प्रेरित प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई जित्न धेरै ट्रान्समिसिबल र अधिक सक्षम भएको प्रमाणित गरेको छ। तर केही देशमा युरोप जस्तै जर्मनीले अनिवार्य FFP2 मास्कहरू - जुन हो EU मानक प्रस्ताव N95-स्तर सुरक्षा - जनवरी 2021 को रूपमा। यो विश्वव्यापी पीपीई उपलब्धता समस्याहरू समाधान भएपछि र Omicron देखा परेको धेरै अघि थियो।
4. यस्तो देखिन्छ कि अमेरिकीहरूले थप लागतहरूको सामना गरिरहेका छन्
ठीक छ, अमेरिकामा मूल्यहरू लुमिङको बारेमा मिडिया रिपोर्टहरू पछि बढ्यो सीडीसी मार्गदर्शन अपडेट। उदाहरण को लागी, Hotodeal ब्रान्ड को 40 KN95 मास्क को एक प्याक $ 79.99 मा उफ्र्यो। अमेजनपछिल्लो नोभेम्बरमा $16.99 बाट माथि, सबैभन्दा भर्खरको डाटा अनुसार।